लुसी लिउले अनुपम खेर निर्देशित गरे। - एशियाई टाइम्स
नोभेम्बर 20, 2019
प्रियंका चोपडा पछि हामी देख्छौं धेरै प्रख्यात बलिउड सेलिब्रेटीहरु हलिवुडमा आफ्नो हात चलाउँदैछन्।
लुसी न्यू एम्स्टर्डमको दोस्रो सत्रको लागि निर्देशक बने
अभिनेता पश्चिम मा लोकप्रिय एम्स्टर्डम शो मा डा विजय कपूर को आफ्नो लोकप्रिय पहिचान संग एक मैत्री अनुहार भएको छ। हलिउड सेलिब्रेटी लुसी लिउले यस मेडिकल ड्रामा कार्यक्रमको एक एपिसोड निर्देशित गर्दा उनी विशेष गरी उत्साहित थिए। चार्ली एन्जल्स र एलिमेन्टरी जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरू र फिल्महरूमा अभिनय गरेका लुसी न्यू एम्स्टर्डमको दोस्रो सत्रको एपिसोड ११ मा निर्देशक बने।
अनुपम खेरले उनको बारेमा के भनेकी छ!
रचनात्मक अनुपम खेर भन्छिन्, "हामीले भेटेको त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा के थियो भने हामीले कलाकारको रूपमा मिलेर काम गर्नुपर्‍यो, मैले भने कि कुनै दिन हामी पक्कै पनि जान्छौं!"। उनले मेरो काम देखीरहेकी थिइन र त्यो आफैमा एक प्रशंसा हो। यसले मलाई धेरै खुशी बनायो।
एक अभिनेताका बारेमा अन्य कलाकारलाई निर्देशित गर्ने बारेमा अनुपम भन्छिन्, "यो धेरै रमाइलो छ, र एक अभिनेताको निर्देशन पाएकोमा रमाईलो छ, विशेष गरी युवा र उत्साही। यो सबैको लागि अचम्मको कुरा थियो। अन्य जो निर्देशन पाएका छन् योग्य निर्देशकहरू हुन् तर अभिनेताले धेरै नयाँ कम्पोनेन्टहरू बोक्दछन्। मैले उनीसँग दुई दिन काम गरिसकेको छु। उनी दिमागमा उडेलिन, उनको व्यापक रणनीति एकदम फरक छ। ”
किल बिललाई लुसी लिउको आफ्नो मनपर्ने फिल्म कल गर्दै, उनी भन्छन्, “म उनको कामलाई रमाउँछु। कसैको काम थाहा पाएपछि र त्यसपछि उनीहरू द्वारा निर्देशित एक उत्कृष्ट भावना हो र उनी एक धेरै नम्र र दिमाग राख्ने व्यक्ति हुन्। उनी कलाकारहरुको भावना राम्ररी बुझ्छिन् "। यसैले नै उनी चाँडै न्यू एम्स्टर्डमको अर्को सीजनको अनुहार हुन लागेका छन्।
सम्बन्धित विषयहरू:अनुपम खेरहलिउडहलिउड श्रृंखलालुसी लिउनयाँ एम्स्टर्डम
विश्व12 घण्टा अघि